» “अ’प’ह’रण परेकी सुजिता,भण्डारी,को श’व झाडिमा फेला ( भिडियो हेर्नुहोस) “अ’प’ह’रण परेकी सुजिता,भण्डारी,को श’व झाडिमा फेला ( भिडियो हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
“अ’प’ह’रण परेकी सुजिता,भण्डारी,को श’व झाडिमा फेला ( भिडियो हेर्नुहोस)
2021, July 5th, Monday
हाम्रोखबर संवाददाता 457 Views
“असार ११ गते साथीको घर जान्छु भनेर गएकि सुजिताको श’व झा’डिमा फे’ला परेको छ। २० आषाढ । केहि दिन अगाडी कि’ड्न्या’प भएकी भनिएकी राप्ती नगरपालिका वडा नं. ३ की सुजिता भण्डारीको ला’स फे’ला परेको छ । वडा नं. ३ को धमिलीमा रहेको बम्हस्थानि सामुदायिक वनमा भण्डारीको ला’स फे’ला परेको हो । उनका परिवारका सदस्यले लासको पहिचान गरेपछि भण्डारीको ला’स रहेको भन्ने प्र’माण भएको हो । आज दिउसो प्र’हरीले त्यहा ला’स रहेको जानकारी पाएपछि टोलि लिएर सो स्थानमा पुगेको थियो ।”
“प्र’हरी त्यहा पुग्दा ला’सको अवस्था चिन्न नसकिने , स’डेको र ग’लेको अवस्थामा रहेको थियो । वनको विचमा एउटा झ्याङमा अ’ड्किएको अवस्थामा लास रहेको थियो । स्थानिय जनप्रतिनिधि , प्रहरी र स्थानियको टोलिले ला’स पुरा सडे ग’लेको अवस्थामा भेटेका थिए । शरिरमा कपडा रहेको र कसैले मा’रेर फ्याकेको हुन सक्ने प्र’हरीले बताएको छ । लासको पो’ष्टमा’र्टमका लागी प्र’हरीले भरतपुर पठाएको छ।”
“आमा संगको कुराकानी असार महिना सुरु भए लगत्तै धान रोप्ने सिजन पनि सुरु भएको थियो। त्यस दिन सुजिताको घर मा पनि धान रोप्ने दिन थियो। तरकारी किन्न जान्छु भनि घरबाट निस्किएकी सुजिता बिच बाटोबाटै उनि अ’प’ह’रण परिन। कसले गर्यो ,किन गर्यो ,के का लागि गर्यो त्यो कसैलाई थाहा छैन। घरमा छोरि का गईछ भनि बुबा आमाले धेरै बेर बाटो कुरेर बसे तर छोरि घर आइनन।”
“उनलाई फोन गर्दा पनि फोन नै लागेन। घरमा बुबाआमालाई पि’र पर्न थाल्यो ,हुर्के बढेकी छोरि एकाएक ह’राउदा। गाउघर ,प्रसासन सबै ठाउ मा खबर गर्दा पनि केहि थाहा भएन। दिउसो दिदीलाई फोन गरेर दिदि म अ’प’हरण मा परेको छु ,मलाई चोकदेखि गाडीमा हाले ,मलाई टा’उकोमा हा’नि रहेका छन् ,आखा बा”धि’दिएका छन् भनि बहिनीको नम्बर बाट दिदीलाई फोन आयो र का’टीए पछि फोन नै नलाग्ने भयो ।”
“सुजिता सरल सुशील र उनको शरीर देख्दा लो’भलाग्दो भएको हुनाल उनि ब’लाकृ’त त हुने होइनिन कि मा’रिने त होइनिन भन्ने घरमा चि’न्ताको बिसय बनको छ। न त उनीलाई कसैले ज’ब’र्ज’स्त प्रेम सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा लग्यो न त अन्य कुनै कारणले उनी अ’प’हर’णमा परिन् केही भन्न सकिने अवस्था छैन। उनी सुजिता भण्डारीको घरमा गएर रो’इर’हेकीउनकी आमा लाई र उनको भाइलाई केही सोधपुछ गर्दा आआफ्नो छोरि प्रति केहि थाहा नभएको कुरा गरिन।”